यस्तो छ कपाल लामो बनाउने घरेलु उपाय « Dainik Online
आलुको रसः कपालको लागि ताजा आलुको रस तयार पार्नुभन्दा आलुको बोक्रा तासेपछि आलुलाई मसिनो टुक्रामा काटी ब्लेन्डरमा मिक्स गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएको पेस्ट अलि बाक्लो भयो भने त्यसमा पानी पनि मिसाउन सकिन्छ । आलुको रस र आलुको टुक्रालाई छुट्याउन मलमलको कपडामा राखेर छान्नुपर्छ । यसरी छानेर आएको रसलाई कपालमा लगाउन सकिन्छ । तर होस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक पटक प्रयोग गर्न आलुको ताजा रस नै चाहिन्छ ।
आलुको रस, मह र अन्डाको मास्कः आलुको रसको प्रयोगले हेयर मास्क पनि बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आलुको रसमा थोरै मह र अन्डा मिसाएर बनाउन सकिन्छ । यस प्याकले कपालको जरामा मसाज गर्नु पर्छ । यसोगर्दा कपालको जरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किनभने यसले जरालाई सक्रिय बनाई कपालको वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । यस मास्कलाई कमसेकम ३० मिनेटसम्म कपालमा राखेर राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ । यो कपाल बढाउने प्राकृतिक तरिका भएकाले यसले कपाललाई कुनै नराम्रो असर गर्दैन । कपाललाई आवश्यक पर्ने चिसोपना प्रदान गर्ने हुनाले जरासम्म पोषण प्रदान गर्न यस मास्कले मद्दत गर्छ ।
बसेको बेला खुट्टा हल्लाइरहनुहुन्छ ? यस्तो रोग लागेको हुनसक्छ
यी हुन् बाँसका तामा खानुका फाइदा, खाएर हेर्नुस्
आँपको खिर खानु भएको छ ? छैन भने यसरी बनाउनुस्
अण्डाको बोक्राले बनाउँछ अनुहार चम्किलो, यसरी बनाउनुस् प्याक
यसरी बनाउनुस् स्वादिष्ट क्वाँटी सुप
‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन त्यागौँ, कोरोनाबाट बचौं’